Ukuvikelwa kwedatha > UVielhuber David
Ulwazi olulandelayo lunikeza ukubuka konke okulula kokuthi kwenzekani kwimininingwane yakho lapho uvakashela le webhusayithi. Idatha yomuntu siqu yiyo yonke imininingwane ongakhonjwa ngayo uqobo. Ungathola imininingwane enemininingwane ngesihloko sokuvikelwa kwedatha esimemezelweni sethu sokuvikelwa kwedatha ngaphansi kwalo mbhalo.
Ukuqoqwa kwedatha kule webhusayithi
Ukucutshungulwa kwedatha kule webhusayithi kwenziwa ngumhlinzeki wewebhusayithi. Ungathola imininingwane yabo yokutholakala kule webhusayithi.
Ngakolunye uhlangothi, idatha yakho iqoqwa lapho usinikeza yona. Lokhu kungaba, ngoba. Isb. Idatha oyifaka kwifomu lokuxhumana.
Eminye idatha irekhodwa ngokuzenzekelayo noma ngemvume yakho lapho uvakashela iwebhusayithi ngezinhlelo zethu ze-IT. Lokhu ikakhulukazi imininingwane yezobuchwepheshe (isb. Isiphequluli se-inthanethi, isistimu yokusebenza noma isikhathi sekhasi kubukiwe). Le datha iqoqwa ngokuzenzakalela ngokushesha nje lapho ufaka le webhusayithi.
Eminye idatha iqoqwe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi ayinaphutha. Enye idatha ingasetshenziselwa ukuhlaziya ukusebenza komsebenzisi.
Unelungelo lokuthola imininingwane ngemvelaphi, umamukeli nenhloso yemininingwane yakho egcinwe mahhala nganoma yisiphi isikhathi. Unelungelo futhi lokucela ukulungiswa noma ukususwa kwale datha. Uma unikeze imvume yakho ekusetshenzisweni kwedatha, ungahoxisa le mvume noma kunini ngokuzayo. Unelungelo futhi lokucela ukuthi ukucutshungulwa kwedatha yakho siqu kuvinjelwe ngaphansi kwezimo ezithile. Unelungelo futhi lokufaka isikhalazo kuziphathimandla eziphethe kahle.
Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi kukheli elinikezwe kwisaziso somthetho uma uneminye imibuzo ngokuvikelwa kwedatha.
Uma uvakashela le webhusayithi, indlela oziphatha ngayo ngokusefa ingahlolwa ngezibalo. Lokhu kwenziwa ikakhulukazi ngezinhlelo ezibizwa ngokuhlaziya.
Ungathola imininingwane enemininingwane ngalezi zinhlelo zokuhlaziya kusimemezelo esilandelayo sokuvikelwa kwedatha.
2. Amanethiwekhi Wokubamba Nokulethwa Kokuqukethwe (CDN)
Le webhusayithi isingathwa ngumhlinzeki wesevisi wangaphandle (i-hoster). Imininingwane yomuntu erekhodwe kule webhusayithi igcinwa kumaseva omphathi. Lokhu kungabandakanya ikakhulukazi amakheli e-IP, izicelo zokuxhumana, imeta nedatha yokuxhumana, idatha yenkontileka, imininingwane yokuxhumana, amagama, ukufinyelela kwewebhusayithi kanye neminye imininingwane eyenziwe ngewebhusayithi.
I-hoster isetshenziselwa inhloso yokugcwalisa inkontileka namakhasimende ethu akhona nalawo akhona (Art. 6 Para. 1 lit.b GDPR) futhi ngenhloso yokuhlinzekwa okuphephile, okusheshayo nokusheshayo kokunikezwa kwethu okuku-inthanethi ngumhlinzeki oqeqeshiwe (Art. 6 Para . 1 ovulekile. GDPR).
Umbungazi wethu uzocubungula idatha yakho kuphela kuze kufike lapho kudingekile khona ukufeza izibopho zayo zokusebenza bese ulandela imiyalo yethu maqondana nale datha.
Sisebenzisa i-hoster elandelayo:
Isiphetho senkontileka yokucubungula i-oda
Ukuze kuqinisekiswe ukucubungulwa ngokuya ngemithetho yokuvikelwa kwedatha, sesenze isivumelwano sokusebenza ngoku-oda ne-hoster yethu.
3. Imininingwane ejwayelekile kanye nolwazi oluyimpoqo
Abasebenza kule webhusayithi bakuthatha ngokungathi sína kakhulu ukuvikelwa kwemininingwane yakho. Siphatha imininingwane yakho iyimfihlo futhi ngokuya ngemithetho esemthethweni yokuvikelwa kwedatha kanye nalesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha.
Uma usebenzisa le webhusayithi, kuqoqwa imininingwane ehlukahlukene yomuntu siqu. Imininingwane yomuntu uqobo yimininingwane ongakhonjwa ngayo uqobo. Lesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha sichaza ukuthi iyiphi idatha esiyiqoqayo nokuthi siyisebenzisela ini. Kuchaza nokuthi lokhu kwenziwa kanjani futhi ngayiphi injongo.
Siveza ukuthi ukudluliswa kwedatha nge-Intanethi (isb. Lapho kukhulunywa nge-imeyili) kungaba nezikhala zokuphepha. Ukuvikelwa okuphelele kwedatha ekufinyeleleni kwabantu besithathu akunakwenzeka.
Inothi emzimbeni onakekelayo
Ngaphandle kokuthi kuchazwe isikhathi esithile sokugcina kulesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha, idatha yakho yomuntu siqu izohlala nathi kuze kube yilapho injongo yokucubungula idatha ingasasebenzi. Uma wenza isicelo esisemthethweni sokususa noma sokubuyisa imvume yakho ekucutshungulweni kwedatha, idatha yakho izosuswa, ngaphandle kokuthi sinezinye izizathu ezivunyelwe ngokomthetho zokugcina imininingwane yakho (isb. Izikhathi zentela noma zokugcinwa kokuhweba); esimweni sokugcina, ukususwa kwenzeka ngemuva kokuthi lezi zizathu zingasasebenzi.
Inothi ekudlulisweni kwedatha kuya e-USA
Iwebhusayithi yethu ifaka amathuluzi avela ezinkampanini ezise-USA. Lapho la mathuluzi esebenza, imininingwane yakho yangasese ingadluliselwa kumaseva ase-US ezinkampani ezifanele. Sithanda ukuveza ukuthi i-USA ayilona izwe lesithathu eliphephile ngaphakathi kwencazelo yomthetho wokuvikelwa kwedatha we-EU. Izinkampani zase-US ziphoqelekile ukuthi zinikezele ngemininingwane yomuntu kuziphathimandla zokuphepha ngaphandle kwakho njengomuntu othintekayo okwazi ukuthatha izinyathelo zomthetho ngalokhu. Ngakho-ke akunakuphikwa ukuthi iziphathimandla zase-US (isb. Izinsizakalo eziyimfihlo) ziyacubungula, zihlole futhi zigcine unomphela idatha yakho kumaseva ase-US ngezinjongo zokuqapha. Asinalo ithonya kule misebenzi yokucubungula.
Imisebenzi eminingi yokucubungula idatha ingenzeka kuphela ngemvume yakho eqondile. Ungabuyisa imvume yakho noma kunini. Ukuba semthethweni kokucutshungulwa kwedatha okwenziwe ngaphambi kokuchithwa kuhlala kungathinteki ekuhoxisweni.
Ilungelo lokuphikisa ukuqoqwa kwedatha ezimweni ezikhethekile kanye nokukhangisa okuqondile (Art. 21 GDPR)
Uma ukuqhutshwa kwedatha kwenzeka ngesisekelo se-Art. 6 Para. 1 Lit. E noma F GDPR, unelungelo lokuphikisa ukucutshungulwa kwedatha yakho yangasese nganoma yisiphi isikhathi ngenxa yezizathu ezivela esimweni sakho esithile; lokhu kusebenza nasekuphrofayeleni ngokuya ngalezi zinhlinzeko. Isisekelo sezomthetho esifanele lapho ukucubungula kusekelwe kungatholakala kulesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha. Uma uphika, ngeke sisacubungula imininingwane yakho ethintekayo, ngaphandle kokuthi sikwazi ukufakazela izizathu ezizwakalayo zokucubungula okudlula izintshisekelo zakho, amalungelo nenkululeko noma ukucubungula kusebenza ukufakazela, ukusebenzisa noma ukuvikela izimangalo zomthetho ( Ukuphikisa ngokusho kobuciko. 21 Para. 1 GDPR).
Uma imininingwane yakho yomuntu siqu icutshungulwa ukuze kusetshenziswe i-imeyili eqondile, unelungelo lokuphikisana nganoma yisiphi isikhathi ekucutshungulweni kwedatha yomuntu siqu ephathelene nawe ngenhloso yokukhangisa okunjalo; lokhu kusebenza nasekuphakamiseni imininingwane njengoba kuhlotshaniswa nokukhangisa okuqondile. Uma uphikisa, imininingwane yakho ngeke isasetshenziselwa ukuthengisa ngqo (ukuphikisa ngokwe-Art. 21 (2) GDPR).
Ilungelo lokufaka isikhalazo kuziphathimandla ezifanele zokuphatha
Uma kwenzeka kwephulwa i-GDPR, izifundo zedatha zinelungelo lokufaka isikhalazo kuziphathimandla zokuphatha, ikakhulukazi ezweni eliyilungu lendawo abahlala kuyo, indawo abasebenza kuyo noma indawo yokwephulwa kwezinsolo. Ilungelo lokudlulisa icala likhona ngaphandle kokubandlulula kwezinye izindlela zokuphatha noma zokwahlulela.
Unelungelo lokuba nemininingwane esiyicubungula ngokuzenzekelayo ngesisekelo semvume yakho noma ukugcwalisa inkontileka enikezwe wena noma umuntu wesithathu ngendlela efanayo, efundeka ngomshini. Uma ucela ukudluliswa okuqondile kwemininingwane komunye umuntu obhekele lokhu, lokhu kuzokwenziwa kuphela uma kungenzeka ngokomthetho.
Ngezizathu zokuphepha nokuvikela ukudluliswa kokuqukethwe okuyimfihlo, okufana nama-oda noma imibuzo osithumela yona njengophethe iwebhusayithi, le webhusayithi isebenzisa ukubethela kwe-SSL noma kwe-TLS. Ungabona ukuxhumeka okubethelwe ngeqiniso lokuthi ulayini wekheli wesiphequluli uyashintsha ukusuka ku- "http: //" uye ku- "https: //" nangophawu lokukhiya kulayini wakho wesiphequluli.
Uma ukubethela kwe-SSL noma kwe-TLS kusebenza, idatha oyidlulisela kithi ayinakufundwa ngabantu besithathu.
Imininingwane, ukususwa nokulungiswa
Ngaphakathi kohlaka lokuhlinzekwa kwezomthetho okusebenzayo, unelungelo lokukhulula imininingwane emayelana nemininingwane yakho egciniwe, imvelaphi yabo nomamukeli kanye nenhloso yokucubungula idatha futhi, uma kunesidingo, ilungelo lokulungisa noma ukususa le datha. Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi kukheli elinikezwe kwisaziso somthetho uma uneminye imibuzo mayelana nendaba yomuntu siqu.
Ilungelo lokukhawulelwa kokucubungula
Unelungelo lokucela ukuthi ukucubungula idatha yakho yomuntu siqu kuvinjelwe. Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi ekhelini elinikezwe kwisaziso somthetho. Ilungelo lokuvinjelwa kokucubungula likhona ezimweni ezilandelayo:
Uma uphikisana nokunemba kwemininingwane yakho egcinwe yithi, imvamisa sidinga isikhathi ukubheka lokhu. Ngesikhathi sokuhlolwa, unelungelo lokucela ukuthi ukucubungula imininingwane yakho yangasese kuvinjelwe.
Uma ukuqhutshwa kwedatha yakho yomuntu siqu kwenzeke / kwenzeka ngokungemthetho, ungacela ukuvinjelwa kokucutshungulwa kwedatha esikhundleni sokususwa.
Uma singasayidingi imininingwane yakho yangasese, kepha ubadinga ukuthi basebenzise, ​​bavikele noma baqinisekise izimangalo zomthetho, unelungelo lokucela ukuthi ukucubungula imininingwane yakho kungavinjelwa kunokuba kususwe.
Uma ufake isikhalazo ngokuya ngobuciko 21 Isigaba 1 GDPR, izintshisekelo zakho nezethu kumele zikalwe. Uma nje kungakacaci okwamanje ukuthi izintshisekelo zikabani ezikhona, unelungelo lokucela ukuthi ukucutshungulwa kwedatha yakho siqu kuvinjelwe.
Uma ukhawulele ukucubungula imininingwane yakho, le datha - ngaphandle kwesitoreji sayo - ingasetshenziswa kuphela ngemvume yakho noma ukufakazela, ukusebenzisa noma ukuvikela izimangalo zomthetho noma ukuvikela amalungelo omunye umuntu wemvelo noma wezomthetho noma ngenxa yezizathu ezibalulekile zomphakathi kusetshenzwe yi-European Union noma izwe eliyilungu.
4. Ukuqoqwa kwemininingwane kule webhusayithi
Amakhasi wethu we-Intanethi asebenzisa lokho okubizwa ngokuthi "amakhukhi". Amakhukhi amafayili wombhalo amancane futhi awabangeli monakalo kudivayisi yakho. Zigcinwa okwesikhashana isikhathi seseshini (amakhukhi weseshini) noma unomphela (amakhukhi waphakade) kudivayisi yakho. Amakhukhi eseshini asuswa ngokuzenzakalela ngemuva kokuvakasha kwakho. Amakhukhi angunaphakade ahlala agcinwe kudivayisi yakho yesiginali uze uwasuse wena noma isiphequluli sakho sewebhu sizisuse ngokuzenzakalela.
Kwezinye izimo, amakhukhi avela ezinkampanini zangaphandle angagcinwa futhi kudivayisi yakho lapho ufaka iwebhusayithi yethu (amakhukhi wenkampani yangaphandle). Lokhu kusivumela wena noma wena ukusebenzisa amasevisi avela eceleni (isb. Amakhukhi okucubungula amasevisi wokukhokha).
Amakhukhi anemisebenzi ehlukene. Amakhukhi amaningi ayadingeka ngobuchwepheshe ngoba imisebenzi ethile yewebhusayithi ibingasebenzi ngaphandle kwayo (isb. Umsebenzi wenqola yokuthenga noma ukuboniswa kwamavidiyo). Amanye amakhukhi asetshenziselwa ukuhlola ukusebenza komsebenzisi noma ukubonisa ukukhangisa.
Amakhukhi adingekayo ukwenza inqubo yokuxhumana nge-elekthronikhi (amakhukhi adingekayo) noma ukuhlinzeka ngemisebenzi ethile oyidingayo (amakhukhi asebenzayo, isb. ngesisekelo se-Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR, ngaphandle uma kunikezwe isisekelo esihlukile sezomthetho. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo esemthethweni ekugcineni amakhukhi wokuhlinzekwa kwezinsizakalo zawo okungenaphutha nokwenziwe kahle. Uma imvume yokugcinwa kwamakhukhi iceliwe, amakhukhi athintekayo agcinwa kuphela ngesisekelo semvume (i-Art. 6 Para. 1 lit. A GDPR); imvume ingahoxiswa nganoma yisiphi isikhathi.
Ungasetha isiphequluli sakho ukuze waziswe ngokusethwa kwamakhukhi futhi uvumele amakhukhi ezimweni ngazinye, ungafaki ukwamukelwa kwamakhukhi kwamacala athile noma ngokujwayelekile, futhi wenze ukususwa okuzenzakalelayo kwamakhukhi lapho uvala isiphequluli. Uma wenza kungasebenzi amakhukhi, ukusebenza kwale webhusayithi kungavinjelwa.
Uma nje amakhukhi esetshenziswa izinkampani ezivela eceleni noma ngezinhloso zokuhlaziya, sizokwazisa ngalokhu ngokuhlukile kumongo walesi simemezelo sokuvikelwa kwedatha futhi, uma kudingeka, cela imvume yakho.
Umhlinzeki wewebhusayithi uqoqa ngokuzenzakalela futhi agcine imininingwane kulokho okubizwa ngamafayela we-server log, isiphequluli sakho esidlulisela kuwo ngokuzenzekelayo. lezi izi:
Uhlobo lwesiphequluli nenguqulo yesiphequluli
uhlelo lokusebenza olusetshenzisiwe
Igama lomgcini lekhompyutha engenayo
Isikhathi sesicelo seseva
Le datha ayihlanganisiwe neminye imithombo yedatha.
Le datha iqoqwa ngesisekelo se-Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo efanelekile ekwethulweni okungenasiphambeko ngokwezobuchwepheshe kanye nokwenza kahle kwewebhusayithi yakhe - amafayela we-log log kufanele aqoshwe ngalokhu.
5. Amathuluzi wokuhlaziya nokukhangisa
Le webhusayithi isebenzisa imisebenzi yesevisi yokuhlaziya iwebhu iGoogle Analytics. Umhlinzeki yiGoogle Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
I-Google Analytics inika amandla opharetha wewebhusayithi ukuthi ahlaziye indlela yokuziphatha kwabavakashi bewebhusayithi. I-opharetha yewebhusayithi ithola imininingwane ehlukahlukene yokusetshenziswa, njengokubukwa kwamakhasi, ubude bokuhlala, izinhlelo ezisebenzayo ezisetshenzisiwe kanye nemvelaphi yomsebenzisi. Le datha ingafingqwa i-Google kuphrofayela enikezwa umsebenzisi ofanele noma idivayisi yakhe.
I-Google Analytics isebenzisa ubuchwepheshe obuvumela umsebenzisi ukuthi abonakale ngenhloso yokuhlaziya ukusebenza komsebenzisi (isb. Amakhukhi noma ukuthathwa kweminwe yedivayisi). Imininingwane eqoqwe iGoogle ngokusetshenziswa kwale webhusayithi ivame ukudluliselwa kuseva yeGoogle e-USA futhi igcinwe lapho.
Leli thuluzi lokuhlaziya lisetshenziswa ngokwesisekelo sobuciko. 6 Para. f GDPR. Umhlinzeki wewebhusayithi unentshisekelo efanele ekuhlaziyeni ukusebenza komsebenzisi ukuze asebenzise iwebhusayithi yakhe kanye nokukhangisa kwayo. Uma kuceliwe imvume ehambisanayo (isb. Imvume yokugcina amakhukhi), ukucubungula kwenzeka kuphela ngesisekelo sobuciko. 6 Para. 1 lit. i-GDPR; imvume ingahoxiswa nganoma yisiphi isikhathi.
Ukudluliswa kwedatha kuya e-USA kusekelwe ezigabeni ezijwayelekile zesivumelwano seKhomishini ye-EU. Imininingwane ingatholakala lapha: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
Yenza kungasebenzi i-Google Analytics
Siqalise ukusebenza kwe-IP ngokungaziwa kule webhusayithi. Ngenxa yalokho, ikheli lakho le-IP lizofinyezwa i-Google emazweni angamalungu e-European Union noma kwezinye izivumelwano ezenza isivumelwano se-European Area Area ngaphambi kokuba idluliselwe e-USA. Ikheli le-IP eligcwele lidluliselwa kuphela kuseva yeGoogle e-USA futhi ifushaniswe lapho ezimweni ezihlukile. Egameni lomhlinzeki wale webhusayithi, iGoogle izosebenzisa lolu lwazi ukuhlola ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi, ukuhlanganisa imibiko ngomsebenzi wewebhusayithi nokunikeza opharetha iwebhusayithi ezinye izinsizakalo eziphathelene nomsebenzi wewebhusayithi nokusetshenziswa kwe-inthanethi. Ikheli le-IP elidluliswa yisiphequluli sakho njengengxenye ye-Google Analytics ngeke lihlanganiswe nenye idatha ye-Google.
Ungavimbela i-Google ekuqoqeni nasekusebenzeni idatha yakho ngokulanda nokufaka i-plug-in yesiphequluli etholakala ngaphansi kwesixhumanisi esilandelayo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Ungathola imininingwane eminingi ekuphatheni idatha yomsebenzisi ku-Google Analytics kusimemezelo sokuvikela idatha se-Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .
Senze isivumelwano sokucubungula i-oda ne-Google futhi sisebenzise ngokuphelele izidingo eziqinile zeziphathimandla zokuvikela idatha zaseJalimane lapho zisebenzisa iGoogle Analytics.
Imininingwane egcinwe yi-Google ezingeni lomsebenzisi nelezehlakalo ezixhunywe kumakhukhi, ama-ID omsebenzisi (isb. I-ID yomsebenzisi) noma ama-ID wokukhangisa (isb. Amakhukhi e-DoubleClick, i-Android advertising ID) awaziwa ngemuva kwezinyanga eziyi-14 noma kususiwe. Ungathola imininingwane ngalokhu ngaphansi kwesixhumanisi esilandelayo: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de